အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းသိသင့်တဲ့သတင်းများ
29 ต.ค. 2561 - 08:57 น.
နာဂ ကျေးရွာ (၂) ရွာ ရွှေ့ပြောင်းမယ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လဟယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ နာဂ ကျေးရွာ (၂) ရွာကို ဒီနှစ်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းသွားမယ့် ကျေးရွာ (၂) ရွာမှာ စန်တုံရွာနဲ့ တွီးထွီနောက်ကျော့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။
နာဂဒေသ အတွင်းက ကျေးရွာအများစုဟာ တောင်ထိပ်တွေမှာတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သောက်သုံးရေ အပါအဝင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အခက်အခဲ ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့် ကလေးငယ်တွေမှာလည်း ကာကွယ်ဆေးတွေကို ပုံမှန်ထိုးပေးနိုင်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်လည်း ရာသီတုပ်ကွေးလိုရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပွားပါက ခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ သေဆုံးတာတွေလည်းနှစ်စဉ်ဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ကျေးရွာအများစုမှာ ရွာလုံးကျွတ် နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ လိုအပ်နေပေမယ့်လည်း ဒေသခံတွေကသဘော မတူကြတာကြောင့် ကျေးရွာ ၂ရွာကိုပဲ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အီးယူအနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေမလုပ်ခင် မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံမယ်
ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ ဟာဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်တော့မယ့်အပေါ် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေဆုံပြီး ဆွေးနွေးမေးမြန်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ အရင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ ကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေး (GSP) ရုပ်သိမ်းရေး အပါအဝင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့လည်း EU တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။
မစ္စတာ ဝီချိုင်းဓာတ်ပုံကို နှုတ်ဆက်ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ လက်ဆောင်တွေနဲ့အတူတွ့ရ
လက်စတာ အသင်းပိုင်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံသား ဝီချိုင်း စီဝတ်တနာ ပရာဖာ သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြု
လက်စတာ အသင်းပိုင်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံသား ဝီချိုင်း စီဝတ်တနာ ပရာဖာ သေဆုံးကြောင်း အသင်းကနေ အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က လက်စတာစီးတီးဘောလုံးကွင်းမှာ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ပြီး မီးလောင်သွားရာမှာ သေဆုံးခဲ့သူ ၅ဦးထဲမှာ အသင်းပိုင်ရှင် မစ္စတာ ဝီချိုင်း ပါဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။
သေဆုံးသူ ၅ဦးထဲမှာ မစ္စတာဝီချိုင်းရဲ့ ဝန်ထမ်း ၂ဦးနဲ့ ပိုင်းလော့အပါအဝင်နောက်ထပ် လိုက်ပါသူတစ်ဦး တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
၁၀ရာခိုင်နှုန်းအသာနဲ့ ပြိုင်ဖက်ကိုအနိုင်ရသွားတဲ့ လက်ယာခေါင်းဆောင်
ဘရာဇီးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ယာခေါင်းဆောင် Jair Bolsonaro အနိုင်ရ
ဘရာဇီးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ယာခေါင်းဆောင် Jair Bolsonaro အနိုင်ရပြီး ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။
လက်ယာခေါင်းဆောင် Jair Bolsonaro ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးမှုအားလုံးရဲ့ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိခဲ့ပြီး လက်ဝဲခေါင်းဆောင် ဟာ Fernando Haddad ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအသာနဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ လက်ယာခေါင်းဆောင် Jair Bolsonaro က ဘရာဇီးဟာ ရာဇဝတ်မှုတွေထူပြောနေပြီး အကျင့်ပျကလာဘ်စားမှုတွေရှိနေတာကို အင်အားသုံးဖယ်ရှားပြီးသန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းသိသင့်တဲ့သတင်းများ